China ngwa ngwa multilayer High Tg Board na imikpu ọla edo maka ndị na-emepụta modem na ndị na-eweta ya. Kangna
ngwa ngwa multilayer High Tg Board na immersion gold maka modem
Typedị ihe: FR4 Tg170
Emechara mbadamba osisi: 2.0mm
Ebute oge: ụbọchị iri na abụọ
Mgbe ọnọdụ okpomọkụ nke bọọdụ sekit Tg dị elu na-ebili na mpaghara ụfọdụ, mkpụrụ ahụ ga-agbanwe site na "ọnọdụ steeti" gaa na "steeti roba", a na-akpọkwa ọnọdụ okpomọkụ n'oge a iko mgbanwe okpomọkụ (Tg) nke efere ahụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Tg bụ ọnọdụ kachasị elu (℃) nke mkpụrụ ya na-agbanwe agbanwe. Nke ahụ bụ ịsị, ihe nkịtị PCB so na ihe dị elu na-eme ka ọ dị nro, nrụrụ, agbaze na ihe ndị ọzọ, kamakwa ọ na-egosi oke ọdịda nke akụrụngwa na eletriki (echeghị m na ịchọrọ ịhụ ngwaahịa ha ka ọ pụta. ).
General Tg efere karịrị 130 degrees, elu Tg bụ n'ozuzu karịa 170 degrees, na ọkara Tg bụ ihe karịrị 150 degrees.
A na - akpọkarị PCB nwere Tg≥170 high nnukwu bọọdụ sekit Tg.
Tg nke mkpụrụ na-abawanye, na nkwụsị nke okpomọkụ, nkwụsị mmiri, nguzogide kemịkal, nkwụsi ike nkwụsi ike na njirimara ndị ọzọ nke bọọdụ sekit ga-akawanye mma. Ihe dị elu TG bara uru, nke ka mma ịrụ ọrụ nrụgide nke efere ga-aka mma. Karịsịa na usoro enweghị ndu, a na-etinye TG dị elu n'ọrụ.
Akwa Tg na-ezo aka na nguzogide ọkụ dị elu. Na mmepe ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ eletrọniki, ọkachasị ngwaahịa eletrọniki nke kọmpụta na-anọchi anya, na mmepe nke ọrụ dị elu, nnukwu multilayer, mkpa PCB mkpụrụ ihe dị elu na-eguzogide ọkụ dị ka nkwa dị mkpa. Mmalite na mmepe nke teknụzụ nrụnye dị elu nke SMT na CMT nọchiri anya na-eme PCB ka ọ dabere na nkwado nke nkwụsi ike ọkụ dị elu nke mkpụrụ okwu na obere oghere, eriri ọma na ụdị dị mkpa.
Yabụ, ọdịiche dị n'etiti FR-4 na elu-TG FR-4 bụ na n'ọnọdụ ala, ọkachasị mgbe hygroscopic na kpụ ọkụ n'ọnụ, ike igwe, nkwụsi ike akụkụ, nrapado, nsị mmiri, ire ere ọkụ, mmụba ọkụ na ọnọdụ ndị ọzọ nke ihe ndi ahu di iche iche. Ngwaahịa Tg dị elu dị mma karịa ihe PCB substrate nkịtị. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọnụọgụ ndị ahịa chọrọ bọọdụ sekit Tg dị elu abawanye kwa afọ.
Nke gara aga: 3 oz solder nkpuchi ịkwụnye ENEPIG arọ ọla kọpa
Osote: otu aka nke imikpu ọla edo dabere na Board